Qalbi Dhagax iyo Qiraalkii uu bixiyay | Saxil News Network
July 10, 2018 - Written by editor
Image captionCabdikariim Sheekh Muuse iyo Xildhibaan Maxamed Cumar Carte Qaalib
Waxa uu Qalbi Dhagax ka hadlay xaflad baraalan oo lagu soo dhaweynayay oo lagu qabtay magaalada Nairobi, wariyaha BBC-daCabdiraxmaan Xaaji Caddoow oo dhagaystay khudbadda Cabdikariim ayaa warbixinta kusoo koobaya nuxurka hadalkiisa maadaamaa ay BBC-da u suurtogali weysay isku day dhawr ah oo aan ku waraysan lahayn.
Qalbidhagax ayaa intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed ay guulaysan doonaan, “waxay ka guulaysan doonaan rag kasta oo cadawgooda iyo xaasidkooda ah, waxay ku guulaysan doonaan Illaahay magaciisa, kartidooda iyo iimaankooda, waxay noqon doonaan umad gaadha aayahooda iyo qiyamka umadooda.
Wuxuu sheegay inuu xoojin doono sidii umadda Soomaaliyeed ”dib loogu mideyn lahaa.”
Image captionQalbi Dhagax markii laga soo siidaayay xabsiga Itoobiya
Cabdikariim waxa uu yiri “Halgamada xornima doonka umadda Soomaaliyeed ONLF meysan billaabin dagaallada xornima doonka Soomaalidu wuxuu soo billaawday qarnigi 16aad, Axmed Gurey, Seyid Maxammed Cabdille Xasan, halganki SYL, Jeeshkii Nasrullaah, Halgankii 1977 ee Soomaali Galbeed dhammaantood waxaa lagu raadinayey dhul iyo qaddiyadda umadda Soomaaliyeed”.
Wuxuu intaasi ku daray “Halganka maanta ay ONLF hoggaamineyso waxuu ka mid yahay oo uu daba socdaa halgamadi umadda Soomaliyeed waxa la doonayaana waa hal dad, waa hal dal, waxaana la xureynayana waa hal umad”.
Markii ugu horeysay waxa uu Qalbi Dhagax iftiimiyay sidii loola dhaqmay markii laga qabtay magaalada Gaalkacayo sanadkii hore , wuxuuna yiri “Aniga oo ah C/Kariim Shekh Muuse (Qalbidhagax) waxaan muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaallamay dalka Soomaliyeed, aniga oo dagaal ku jira yaan ku qaan gaaray, weligeey shaqa guud mooyee shaqa gaar ah maanan qabanin waxaan u soo dagaallamay nafteydii iyo dhiiggeyga oo aan u huray dadka Soomaaliyeed”. .
“Haddaba marki aan arkay sida ay iila dhaqantay dowladda Soomaaliyeed, qaabki ay u shaqeysay marka hore Gaalkacyaa la iga qabtay seddex habeen baa la igu hayey si fool xun oo ihaana ah ayaa la iila dhaqmay. Waa la iga soo qaaday, Muqdisho ayaa la keenay waxaa la iila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah. Markii aan arkay inta la igarba duubay aniga oo caga cad, oo qaawan la igu wareejiyey ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iiga careysiisay aadna ii xanuujisay, iigana nixisay” ayuu yiri Qalbi Dhagax oo dadkii dhagaysanayay ay ilmo kusoo joogsatay indhahooda.
“Godey markii la i geeyey waxaa isku soo baxay Soomaalidi Godey joogtay inteedi xumeyd, dhaanto ayey igu dul qabsadeen aflagaadda markay ii miiseen seey ii caayanayeen markii la iga qaaday aniga oo ihaaneysan oo katiineydsan oo lugaha ka xiran, oo gacmaha ka xiran oo indhaha ka xiran waxaan aaminay inaanan dal lahayn”.
Image captionSiyaasiyiin Kenya , Soomaaliya iyo Itoobiya ka socda ayaa ka qeybgalay
Waxa kale oo uu sheegay in qorshihiisa uu yahay in uu safar dhulka ku maro Soomaaliya, ujeedkana uu yahay sidii uu dadka u mideyn lahaa, ulana hadli lahaa